Banaan baxyo ka dhan ah Go’aan lacagaha ah uu gaaray Maamulka oo Baladweyne ka dhacay – SBC
Banaan baxyo ka dhan ah Go’aan lacagaha ah uu gaaray Maamulka oo Baladweyne ka dhacay
Posted by Webmaster on July 29, 2013 Comments
Magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa ka dhacay Banaan bax ay ka qeyb qaateen shacabweynaha ku dhaqan magaaladaas iyo dad ubadan reer guuraa oo magaalada qaab ganacsi ku yimaada.
Banaanbaxa maanta ka dhacay Baladweyne ayaa waxa lagu diidanaa go’aan ay masuuliyiinta maamulka Dowlada Federaalka ee baladweyne ku gaareen in la joojiyo lacago sida la sheegay falso ahaa oo ay u soo gudbiyeen ganacsatada isticmaalkooda.
boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baladweyne waxaana ay ku dhawaaqayeen ereyo ay kaga soo horjeedaan ganacsatada iyo go’aanka maamulku ka gaaray arimaha lacagahaasi.
Dhowaan ayay aheyd markii la sheegay in goboku ay gudaha u soo gashay lacago falso ah kuwaas oo ay ka biya diideen ganacsatada gobolka, halka dadweynuhuna ku muujiyeen diidmadaas cabashooyin kala duwan oo ay saxaafada gaarsiiyeen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ay markii dambe bilowdeen rabshado balse ay ciidamada amaanku ka hortageen amaankuna si adag u sugay.
Dadweynaha banaanbaxa sameynayay ayaa ugu baaqay maamulka dowlada ee Baladweyne in ay ku dhaqaaqaan talaabooyin arintan lagu xalinayo,
Waxay aheyd dhowan markii lacago been abuur ah lagu gubay gudaha magaaladaas, waxaana uu amar ku bixiyay maamulku in talaabo laga qaado cidii lagu qabto in ay lacago been abuur ah soo geliyaan gobolka.
SBC International Baladweyne